2019 လူကြိုက်အများဆုံး Peptide Degarelix: ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသည်အသုံးပြုထားတဲ့တစ်ဦးကမူးယစ်ဆေးဝါး
စက်တင်ဘာလ 24, 2019
1 ။ Degarelix ကဘာလဲ?
2 ။ အကြောင်းမူကားအသုံးပြု Degarelix အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
3 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ Degarelix အမှုန့်ယန္တရား
4 ။ Degarelix ဆက်သွယ်မှုသည်
5 ။ ငါ Degarelix ထိုးသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲလက်လွတ်လျှင်မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိပါသလား?
6 ။ စေဘယ်အရာကိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုနှင့်သတိပေးချက်များ Degarelix နိုင်မလဲ?
8 ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်
ခေတ်ပြိုင်, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာယောက်ျား၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်သောရောဂါများထဲကတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အစောပိုင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုဒီရောဂါကုသရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ Degarelix အမှုန့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသမှုများအတွက်ထိရောက်သောမူးယစ်ဆေး, ငါတို့သည်ကောင်းမွန်စွာနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်နိုင်အောင်ကျနော်တို့ကအကြောင်းတချို့အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များနားလည်ရန်ပဏာမခြေလှမ်းကိုယူသင့်ပါတယ်။
Degarelix (214766-78-6) သည် testosterone ဟော်မုန်းအပါအ ၀ င်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဟော်မုန်းပမာဏကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသောဟော်မုန်းကုသမှုဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor antagonists ဟုခေါ်သည့်ဆေးအမျိုးအစားများအောက်တွင်ခွဲခြားထားသည်။ ဒီဒြပ် peptide အနကျအဓိပ်ပါယျမူးယစ်ဆေးဝါးကို Firmagon လို့နာမည်ပေးတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ -
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား: GnRH Analogue; GnRH ရန်; Antigonadotropin
အံ Mass: 1630.75 g / mol ဂရမ်· mol-1
မစင်: မစင် (70-80%), ဆီး (20-30%)
ပပျောက်ရေးနေ့တစ်ဝက်-Life: 23-61 ရက်ပေါင်း
2. အကြောင်းမူကားအသုံးပြု Degarelix အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
Degarelix အမှုန့်အဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသရန်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ FDA က 24 အပေါ်အမေရိကန်လူနာအတွက်အဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသမှုများအတွက်ဆေးဝါးအတည်ပြုth ဒီဇင်ဘာလ 2008 ။ 17 တွင်th ဖေဖော်ဝါရီလ 2009, ဥရောပကော်မရှင်ဝတ်စုံကိုနောက်တော်သို့လိုက်နှင့်အဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးလူနာအတွက်အသုံးပြုရန် Degarelix မူးယစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့သည်။
မှတ်ရန် Degarelix ဆေးထိုး ဆေးပညာစက်ရုံအတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်သူနာပြုအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သင့်သည်။ Degarelix လည်းအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆွီဒင်ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, မူးယစ်ဆေးလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအပေါ်ထိုးသွင်းခံရဖို့ဓာတုသင်းအေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုရန်လေ့လာခဲ့သည်။ Degarelix ရင်သားကင်ဆာကုသမှုကိုလည်းယောက်ျားအတွက်ရင်သားကင်ဆာတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာကုသမှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်။
သင့်ဆရာဝန်ကအခြားအခြေအနေများအဘို့ဤဆေးအကြံပြုလိမ့်မည်။ သငျသညျအဘယျကွောငျ့ဒီဆေးကိုယူပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာမသိကြပါကသင်သည်သင်၏ဆရာဝန်စကားပြောအရေးကြီးပါသည်။ သည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူအမျှသင်တို့ပြုသကဲ့သို့သူတို့သည်တူညီသောရောဂါလက္ခဏာရှိရင်တောင်တခြားသူတွေမှ Degarelix မပေးသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်၏ပြော-ဒါမပါဘဲခေါ်ဆောင်သွားလျှင်မူးယစ်ဆေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
(1) သငျသညျ Degarelix ယူမီအပိုတစ်ခုခုသိသင့်
Degarelix အထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအနာဂတျမှာဖခင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်နေကြသည်ဆိုပါကသင်သည်သင်၏ဆရာဝန်စကားပြောကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်။ သငျသညျကုသမှုမစတင်မီသုက်ပိုးသိုလှောင်စဉ်းစားရန်လိုပေမည်။
ဤသည်မူးယစ်ဆေးအမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုခြင်းမရှိပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကဒီဆေးကိုမသုံးသင့်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးသန္ဓေသားကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ, သို့မဟုတ်ကလေးများရှိသည်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုနို့လည်းဒီဆေးကို အသုံးပြု. ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့, ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေ Degarelix မသုံးသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်အနေနဲ့နောက်ခံကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိပါက Degarelix ယူလုံခြုံပါဘူး။ သငျသညျနေခြင်းဖြင့်သတိလစ်, မမှန်နှလုံးခုန်, ဒါမှမဟုတ်ရုတ်တရက်သေစေခြင်းအလိုငှါရှားပါးနှလုံးပြဿနာဖြစ်သည့်ရှည်လျား QT syndrome ရောဂါရှိသည်ဆိုပါကသင်၏ဆရာဝန်အကြောင်းကြားရန်သေချာစေပါ။ သင်တစ်ဦးနှလုံး, ကျောက်ကပ်, ဒါမှမဟုတ်အသည်းရောဂါရှိသည်ဆိုပါကသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။ သငျသညျဆိုဒီယမ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်, ပိုတက်စီယမ်, သို့မဟုတ်သင့်သွေးထဲမှာကယ်လ်စီယမ်မြင့်မားသို့မဟုတ်အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်စေရှိပါကလည်းသင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ဒါဟာသင်အချို့သောဆေးဝါးများဒါမှမဟုတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများမှမတည့်လျှင်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ပြောပြရန်လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာသင် Degarelix ဆေးထိုးဖို့မတည့်လျှင်သိရန်သူတို့ကို enable ပါလိမ့်မယ်။
(2) Degarelix Injection ကိုသောက်သုံးသော
120 ဖလားကို mg: တစ်ခုချင်းစီကို Single-အသုံးပြုမှုဖလားကို Degarelix acetate အဖြစ် Degarelix မှုန့် 120 မီလီဂရမ်ပါရှိသည်။
80 ဖလားကို mg: တစ်ခုချင်းစီကို Single-အသုံးပြုမှုဖလားကို၏ 80 မီလီဂရမ်ပါရှိသည် Degarelix အမှုန့် Degarelix acetate အဖြစ်။
Degarelix တစ်နေရာရာမှာနံရိုးနှင့်ခါးကြားက, အရည်နှင့်အတူရောနှောခြင်းနှင့်အစာအိမ်ဧရိယာထဲမှာအရေပြားအောက်တွင်ထိုးသွင်းရပါမည်သည့်အမှုန့်ပုံစံအတွက်လာပါတယ်။ သင်ဤဆေးကိုလက်ခံရရှိပထမဦးဆုံးအကြိမ်, သငျသညျနှစျခု Degarelix ထိုးပေးလိမ့်မည်။ ကနဦး Degarelix ဆေးထိုးသောက်သုံးသောပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏လစဉ်နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုအတွင်းမှာတစ်ဦးတည်းသာဆေးထိုးခံရလိမ့်မည်။
ကနဦးဆေးထိုး Degarelix 240 Degarelix2၏ 120 အရေပြားအောက်ဆုံးထိုး 40 မီလီဂရမ် / mL တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုမှာတစ်ဦးချင်းစီ MG အဖြစ်အုပ်ချုပ် MG များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကနဦးဆေးထိုးပြီးနောက်, သငျသညျ 80 ၏တစ်ဦးတည်းသာအရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးခံရကြလတံ့သည်ကို 20 ရက်ပေါင်း 28 မီလီဂရမ် / mL တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ MG ။
Degarelix ဆေးထိုးလက်ခံရရှိသွားသည့်အခါ, သင်ဆေးထိုးအုပ်ချုပ်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အစာအိမ်တစ်ဝိုက်တင်းကျပ်စွာအဝတ်အစား, waistband သို့မဟုတ်ခါးပတ်ဝတ်ထားကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦး Degarelix ဆေးထိုးလက်ခံရရှိပြီးနောက်, သင့် waistband သို့မဟုတ်ခါးပတ်ထိုးဧရိယာအပေါ်ဖိအားကိုမထားပါဘူးသေချာ။ သင်တို့သည်လည်းမူးယစ်ဆေးထိုးသွင်းသည်အဘယ်မှာရှိဒေသပွတ်နယ်သို့မဟုတ်ကုပ်ခြစ်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
ကြီးထွားမှုအတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏မှီခိုကြောင်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏လက္ခဏာများကိုကုသဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်လိုအပ်သည်။ ဒီအောင်မြင်ရန်ကဆရာဝန်များကအကြံပြုထားသည်အဖြစ် Degarelix acetate အတိအကျအုပ်ချုပ်သင့်ကြောင်းအလွန်အရေးကြီးသည်ပါပဲ။
Degarelix မူးယစ်ဆေးသင့်ရဲ့အခွအေနေကူညီပေးနေကြောင်းသေချာစေရန်, သင်ကပုံမှန်သွေးစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲချိန်းထားရန်သေချာစေပါ။
သင်တို့သည်လည်း Degarelix ဆေးထိုးအချို့ဆေးပညာဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါသင့်ပါတယ်။ သင်ဤဆေးအောက်မှာရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွေကိုယူပြီးသောအခါအသင်ဤမူးယစ်ဆေးကိုလက်ခံရရှိကြောင်းသင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြရန်သေချာစေပါ။
3. လှုပ်ရှားမှု၏ Degarelix အမှုန့်ယန္တရား
ယောက်ျားဟော်မုန်း testosterone ဟော်မုန်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုလောင်စာဆိုပါတယ်။ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ရာမှဝှေးစေ့တားဆီးကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုနှေးကွေးသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ဖို့လူသိများကြသည်။ ကင်ဆာဆဲလ်ဖို့အထီးဟော်မုန်းများ၏ထောက်ပံ့ရေးချွတ်လုပ်ကြံသောအားဖြင့် testosterone ဟော်မုန်းများ၏အရေးယူပိတ်ဆို့ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းရှိပါတယ်။
Degarelix အမှုန့် (214766-78-6) ကိုခန္ဓာကိုယ်ကသဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာဦးနှောက်ထဲမှာ pituitary gland အတွက် GnRH receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ဒါပါဘူး။ ဒါဟာဟော်မုန်း luiteinising များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီး, အရှင် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ရာမှဝှေးစေ့ကာကွယ်ပေးသည်။
4. Degarelix ဆက်သွယ်မှုသည်
ရုံကအခြားကင်ဆာမူးယစ်ဆေးလိုပဲ Degarelix သည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်နှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါ Degarelix နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာတစ်ဦးအပြန်အလှန်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါမူးယစ်ဆေးဝါးများအမျိုးအစားများအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
အချို့သောပရိုတိန်း kinase inhibitors
ရွေးချယ် serotonin Reuptake inhibitors
အခြားသူတွေအကြား Disopyramide ။
Degarelix နှင့်အတူတွဲသုံးတဲ့အခါအချို့သောဆေးဝါးများ QT ကြာရှည်အဖြစ်လူသိများပုံမှန်မဟုတ်သောနှလုံးစည်းချက်အမျိုးအစားများ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ သင်ဤလေးနက်အခြေအနေနှင့်သငျသညျဆိုပါက၎င်း၏ဆိုးကျိုးများတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်မှာနေသောခေါင်းစဉ်:
အကြီးတန်း (65 နှစ်နှင့်အထက်) Are
အဆိုပါ QT ကြားကာလ၏မွေးရာပါအချိန်ကြာမြင့်စွာဖူး
အနိမ့်ကယ်လစီယမ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်, ဒါမှမဟုတ်ပိုတက်စီယမ်အဆင့်ဆင့်ရှိ
သငျသညျအထကျပါအခွအေနမဆိုရှိသည်, သို့မဟုတ်မည်သည့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေစီမံခန့်ခွဲရန်အချို့သောဆေးဝါးများယူပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သင် Degarelix မူးယစ်ဆေးမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြရန်အရေးကြီးသည်။ သငျသညျကိုယူပြီးသို့မဟုတ်ယူစီစဉ်နေကြသည် over-the-counter ဆေးဝါးများ, အာဟာရဖြည့်စွက်, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီတာမင်, အညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားရန်သေချာစေပါ။ ဤသည် Degarelix interaction ကဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုဆေးဝါးကနေသင်တို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးပါမည်။
ဒါဟာသင်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရေအတွက်ယူပြီးစေခြင်းငှါသင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်နှင့်အတူဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးပါတယ်။ ပထမဦးစွာကအခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူဤဆေးကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုသင်နှင့်အတူဆွေးနွေးရန်ဆရာဝန်ကို enable ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်လည်းသင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခွအေနေဆေးထိုးထိခိုက်စေခြင်းငှါသင်မည်သို့အကြောင်းကြားအဖြစ် Degarelix ၏ထိရောက်မှုပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်လည်းမဆိုအထူးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုသင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
5. ငါ Degarelix ထိုးသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲလက်လွတ်လျှင်မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိပါသလား?
ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ် Degarelix အပေါ် overdosing နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမလက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုရှိပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်တိုင်ပင်မရှိဘဲဤဆေးကိုယူပြီးရပ်တန့်မပေးသင့်ပါတယ်။ ကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏ Degarelix ဆေးထိုးဘို့ရက်ချိန်းလက်လွတ်, ညွှန်ကြားချက်များအဘို့သင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။
မှစ. Degarelix acetate ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်အကျွံဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအလွန်ရှားပါးသည်ဆရာဝန်တစ်ဦးတို့ကအုပ်ချုပ်ရပါမည်။ တစ်ဦး Degarelix အလွန်အကျွံသုံးစွဲ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, သို့သော်, ကသင့်ရဲ့အဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုဗဟိုဌာနကိုပဌနာသို့မဟုတ်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုရှာသောအရေးပါသည်။ သငျသညျယူဘယ်လိုတာပြဒါမှမဟုတ်သင် ယူ. , အဘယျသို့ပွောပွဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်, နှင့်အခါသင်ယူလေ၏။
6. စေဘယ်အရာကိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုနှင့်သတိပေးချက်များ Degarelix နိုင်မလဲ?
များစွာသောအခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူအမျှ Degarelix အမျိုးမျိုးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Degarelix ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပျော့သို့မဟုတ်ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်, သူတို့သည်လည်းယာယီသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါဘုံများမှာ Degarelix ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေများစွာသောကဒီဆေးကိုယူသောသူလူတိုင်းကြုံတွေ့ခံစားမရသည့်:
ထိုကဲ့သို့သောနာကျင်မှု, နီခြင်း, ခိုင်မာသော, ရောင်ရမ်းခြင်းအဖြစ်ဆေးထိုး site ကိုမှာအရေပြားတုံ့ပြန်မှု,
အထက်ပါ Degerelix ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုဆိုးရွားသောမဟုတ်ပေမယ့်သူတို့တစ်တွေအချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်လက်ရှိလျှင်, သူတို့သည်ပြင်းထန်သောပြဿနာများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ဒါဟာသင်အောက်ပါရှားပါးပေမယ့်လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသတိပြုမိမှု၌သင်တို့ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာသောအရေးပါသည်:
ထိုကဲ့သို့သောချောင်းဆိုးခြင်း, အဖျား, lethargy နှင့်လည်ချောင်းနာအဖြစ်တုပ်ကွေးကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ,
Degarelix testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျစေပါတယ်ကတည်းကကြောင့်သွေးအားနည်းရောဂါအဖြစ်လူသိများနေတဲ့အခွအေနေသွေးနီဆဲလ်၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ၏လက္ခဏာများမူးဝြေခင်း, ဖျော့အရေပြား, ပုံမှန်မဟုတ်သောမောပန်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသက်ရှုမဝြခင်းတို့ပါဝင်သည်, ကသငျသညျခကျြခငျြးသင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏သွေးထဲမှာသွေးနီဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အခြိနျမှနျမှအသှေးကိုစမ်းသပ်မှုများလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
Degarelix လည်းဆီးချိုရောဂါ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပါတယ်။ သငျသညျဆီးချိုများမှာပါကသင်သည်သင်၏သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်စောင့်ကြည့်ဖို့ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုတွေကိုခံယူကြောင်းအရေးကြီးပါသည်။
Degarelix လည်းအရိုးပွရောဂါ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာအရိုးပါးလွှာဖြစ်လာစေနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာကိုချိုးဖျက်လိမ့်မည်။ သငျသညျပြီးသားအရိုးပွရောဂါရှိပါကအဲဒါကိုသင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခွအေနေ Degarelix ထိုးထိခိုက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရနိုင်အောင်သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်အကြောင်းကြားရန်အရေးကြီးပါသည်။
တချို့ကလူနာအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူများထက်အခြား Degarelix ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပေမည်။ သင်မသက်မသာသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်စေသည်ဆိုလက္ခဏာကိုတွေ့ကြုံခံစားသင့်တယ်, ဒါကြောင့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲသင်၏ဆရာဝန်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်သင်တစ်ဦးနှလုံးတိုက်ခိုက်မှု၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားရမှု၌ Degarelix ထိုးတာကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အားအကြံပေးချင်ပါတယ်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားလက္ခဏာတွေ, ချွေးတွေနှင့် / သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအန်, ရင်ဘတ်၏ဖိအားသို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာ၏အာရုံခံစားမှု, နာကျင်မှုသင့်ရဲ့နောက်ကျောမှဖြာ, ပြင်းထန်ပျို့ရုတ်တရက်ရင်ဘတ်နာကျင်မှုပါဝင်နိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးလေးနက်မတည့်တုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာများကိုခံစားရမှု၌သင်၏ဆရာဝန်လည်း Degarelix သုံးပြီးရပ်တန့်ရန်သင့်အားအကြံပေးချင်ပါတယ်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားလက္ခဏာတွေအသင်းအဖွဲ့ချုပ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသော angioedema, အခက်အခဲအသက်ရှူနှင့်မျက်နှာ, ပါးစပ်, လက်နှင့် / သို့မဟုတ်ခြေရောင်ပါဝင်နိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသောရှိပါတယ် Degarelix သတိပေးချက်များ စိတျထဲမှာထားရန်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးကဒီဆေးကိုခန္ဓာကိုယ်ကအရည်များ (အန်ဖတ်, ဆီး, ချွေး, မစင်) ဖြတ်သန်းနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့ကြောင့်, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အရည်တစ် Degarelix ဆေးထိုးလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင်၏လက်သို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦး၏အသားအရေနှင့်အဆက်အသွယ်အနည်းဆုံး 48 နာရီနဲ့အခြား surfers သို့လာရန်ခွင့်ပြုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
စိုးရိမ်အချို့ Degarelix ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်နေစဉ်, ဒီဆေးဝါးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမျှော်လင့်အချို့ Degarelix အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းရှိပါတယ်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုများမှာ, Degarelix ဆေးထိုးသည်အခြား convectional ဟော်မုန်းကုထုံးကုသမှုထက် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်မြန်လျှော့ချရေးကမ်းလှမ်းကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်ဆေးဝါးများသောအားဖြင့်အလားအလာလက္ခဏာတွေပိုမိုဆိုးရွားလာယာယီဖြစ်ပေါ်စေသည်သောကနဦး testosterone ဟော်မုန်းမြင့်တက်စေမထားဘူး။
Degarelix ၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာဆေးကိုယေဘူယျအားဖြင့်ကောင်းစွာသည်းခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခြွင်းချက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခုအရဆေးထိုးသည့်နေရာ၌တုံ့ပြန်မှုသည်လီပါရိုလစ်အုပ်စု၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်း <pooled Degarelix group ၏အခန်းငယ် ၄၀% တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုများသောအားဖြင့်ပျော့သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ခဲ့ကြသည်, သူတို့ကပထမ ဦး ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်အများစုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အတော်ကြာလက်တွေ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ပဏာမဒေတာ LHRH agonists နှိုင်းယှဉ်, Degarelix အဆိုပါ 1 အတွင်းသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခြုံငုံရှင်သန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ညွှန်ပြst ကုသမှုတစ်နှစ်။ ဒီကုသမှုကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာအောင်အောင်မြင်မြင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုမိုမြင့်မားသောတကယ်တော့ဒီဆေးဟာမဖြစ်မနေ-ပါစေသော Degarelix အကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
သေးငယ်တဲ့ပမာဏသာရှိအရက်ကိုယူပြီး degarelix ၏အသုံးဝင်မှုသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်ရန်မထင်ထားဘူး။ သို့သော်သင်အမြဲဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာအရက်၏အမြင့်ဆုံးပမာဏယူပြီးကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
သင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးကိုခစျြတစျခုဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိပါတယ်ရှိလျှင်, Degarelix ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုခြောတစျခုသငျသညျရှေးခယျြနိုငျသောအကောင်းဆုံးကုသမှု options များဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Degarelix ကဲ့သို့သောဟော်မုန်းကုထုံးကျော်ခွဲစိတ်ကိုရွေးချယ်စေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်တစ်ခုတည်းသောစိတ်ကူးအကြောင်းပြချက်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ် differential ကိုပု Degarelix အကျိုးကျေးဇူးများကိုကလွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။
Degarelix ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ Degarelix နှင့်နှစ်စဉ်ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်မှာဒေါ်လာ ၄၄၀၀ ဖြစ်သည်။ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာအတွက်အခြားရရှိနိုင်သည့်ဟော်မုန်းကုသမှုများနှင့်အညီဖြစ်သည်။ ဆေးသောက်ရန်အမှုန့်တစ်ချောင်းအတွက် ၈၀ မီလီဂရမ်ထိုးဆေးအတွက် Degarelix ဆေးထိုးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၅၁၉ ခန့်ရှိသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်လည်ပတ်သည့်ဆေးဆိုင်ပေါ်တွင်လည်းမူတည်လိမ့်မည်။
သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦး "ကိုဖြတ်ပြီးလာနိုငျDegarelix အွန်လိုင်းဝယ်ဖို့"ကြော်ငြာ။ သင်သို့သော်အွန်လိုင်းမူးယစ်ဆေးဝယ်ယူသည့်အခါအလွန်သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ သငျသညျတခုအွန်လိုင်းရောင်းချသူထံမှမူးယစ်ဆေးအမိန့်မီသင့်လျော်သောနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများနှင့်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယကိုပြုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အဆိုပါထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဆေးဆိုင် legit နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ရောင်းနေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဥပဒေနှင့်စင်ကြယ်သောပုံစံကြောင်းကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
Degarelix အခန်းအပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ အလင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုကနေဒီဆေးဝါးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပါစေ။ သည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူအမျှသားသမီးများ၏လက်လှမ်းမမီထဲက Degarelix စောင့်ရှောက်လော့။
အိမ်သာထဲမှာဒါမှမဟုတ်စုပ်ဆင်းဥပမာအိမ်ထောင်စုအမှိုက်သရိုက်အတွက်သို့မဟုတ်ရေဆိုးများတွင် Degarelix အမှုန့်, များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးမထားပါနဲ့။ အသုံးပြုမရှိတော့ကုန်ဆုံးသို့မဟုတ်ပြီဆေးဝါးများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့ဘယ်လိုသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကိုမေးပါ။
ဗန် Poppel H ကို, Tombal B, et al (အောက်တိုဘာလ 2008) ။ Degarelix: gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor blocker အသစ် - ဆီးကြိတ်ကင်ဆာကုသမှုတွင်တစ်နှစ်၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပါ ၀ င်သော၊ ကျပန်း၊ အဆင့်နှစ်ဆင့်သောက်သုံးသောလေ့လာမှုမှရလဒ်များ။ အီးယူအာရ်။ Urol ။ 54: 805-13 ။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်အဆင့်မြင့်ဟော်မုန်း-မှီခိုဆီးကျိတ်ကင်ဆာ, Lee က D1, Porter J ကို, Brereton N ကို, Nielsen SK ကို, 2014 ဧပြီများ၏ကုသမှုအတွက်ကျန်းမာရေးဆေးပညာအမျိုးသား Institutes, degarelix ၏ကုန်ကျစရိတ်-utility ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏အမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်; 17 (4 ): 233-47 ။
Gittelman M က, Pommerville PJ, Persson BE, et al (2008) ။ မြောက်အမေရိကဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသမှုများအတွက် degarelix ၏လေ့လာမှုရှာဖွေတာတစ်ဦးက 1 နှစ်ပွင့်လင်းတံဆိပ်, ကျပန်းအဆင့် II ကိုထိုး။ ဂျေ Urol ။ 180: 1986-92 ။